Birch (ဘုစပတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Birch (ဘုစပတ်)
Birch (ဘုစပတ်) ကဘာလဲ။
ဘုစပတ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Birch သည် ဘုစပတ်ပင်ဟု ခေါ်သော ဘယဆေးပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းအပင်၏ အရွက်သည် ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဆေးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၎င်းဆေးပင်ကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ဆီးဆေး၊ ဆီလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်ခြင်းနှင့် ဂေါက်ရောဂါတို့တွင် အသုံးပြုသည်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားကျုံ့ခြင်း၊ လှုပ်ခြင်းများတွင် လိမ်းဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ အနာများနှင့် အဖုများတွင်လည်း လိမ်းဆေးအနေဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် အရေပြားယားယံအကွက်ထွက်ခြင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ၎င်းဆေးပင်တွင် ဆီးဆေး၏ အာနိသင်များရှိကြောင်း ပြထားသော လေ့လာမှုအချို့ရှိသည်။ လေ့လာမှုအသစ်များတွင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကုသရာတွင် အကျိုးရှိသက်ရောက်မှုကို လေ့လာနေကြသည်။
ဘုစပတ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အသုံးပြုသည့်အခါ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်းများကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်။ ဖြစ်ခဲ့လျှင် သင့်တော်သော ကုသမှုခံယူရပါမည်။ နှလုံးအခြေအနေနှင့် သွေးတိုးခြင်းကို လည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရပါမည်။
ပထမဆုံးသုံးသည့်အခါတွင် ဆေးပင်ကို လိမ်းဆေးအဆီများအနေဖြင့် အသားနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ အရေပြားဒဏ်ရာပေါ်တွင် မလိမ်းပါနှင့်။ တည့်မတည့်ကို စမ်းသပ်ရန် မလိမ်းခင် အသားပေါ်တွင် နည်းနည်းစပ်သပ်ကြည့်ပါ။
ဘုစပတ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
သုတေသနများ မပြုလုပ်ရသေးခင်ထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးငယ်များ နှင့် နို့တိုက်မိခင်များတွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိသော လူများ၊ နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ နှင့် သွေးတိုးရောဂါရှိသူများတွင် လည်း အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ဘုစပတ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဤဆေးပင်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသိပ်မရှိပါ။ သို့သော် ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နှိုင်ချေ ရှိပါသည်။ ဆေးပင်ကိုအသုံးပြုသော လူတိုင်း ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် အခြားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနေနိင်သည်။
ဘုစပတ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤ ဆေးပင်သည် ဆီးဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ကျစေပြီး၊ တရုတ်နံနံပင်နှင့် တွဲသုံးလျှင် ဓါတ်ပြုခြင်းကို ဖြစ်စေနှိုင်ပါသည်။
ဘုစပတ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
သစ်ခေါက်၏ ၂ -၃ ဂရမ်ကို ရေဆူဆူထဲတွင် တစ်နာရီခန့် ထားပြီး လက်ဘက်ရည်ကဲ့သို့ တစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ပါ။
လိမ်းဆေးအနေဖြင့် လိမ်းလိုသော နေရာကိုသာလိမ်းရပါမည်။
ဘုစပတ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 73.
Birch. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 352-birch.aspx?activeingredientid=352&activeingredientname=birch. Assessed August 6, 2016.